Bathuthukisa amaSiko emphakathini | News24
Bathuthukisa amaSiko emphakathini
IQEMBU laKwaNyuswa elaziwa nge-Rieco Bird media selizakhele udumo emphakathini wakwaNyuswa namaphethelo ngokuhlela imicimbi eyahlukahlukene yokuthuthukisa amakhono entsha emphakathini.
Leli qembu lisebenza nomphakathi ngezidlela eziningi ezehlukene ikakhulukazi ekuthuthukiseni intsha ngoku gquqguzela amaSiko ayo kanye nangemvelaphi yawo.
Leli qembu likhankase ezikoleni eziningi labona ukuthi izikole azizibandakanyi nezinto eziphathelene namaSiko lokhu kwenze leli thimba lihlale phansi licabange izindlela zokuthuthukisa ama Siko emphakathini.
Ithimba le- Rieco Bird Media libe seliqhamuka nesu lokuhlela umcimbi oba minyaka yonke kusukela ngo-2016 onesiqubulo esithi Nobuhle neGeza Lensizwa.
Lo mcimbi ugqugquzelwa intsha ukuthi izikhandle nokuthi yazi imvelaphi yayo. Okhulumela abe-Rieco Bird Media uMnuz Sbusiso Nzama uthe: “Kuningi okunye esikwenzayo njenge qembu le-Rieco Bird Media konke esikwenzayo sikwenza ngokubambisana nenhlonipho. Kulabo abangenela lo mcimbi ka-Nobuhle neGeza Lensizwa kubhekwa inhlonipho ukwazi imvelaphi yakho kanye nokugqoka kahle ingqephu. Umphakathi nawo ubambe elikhulu iqhaza kuwo lo mcimbi ngoba akukhulunywa nentsha kuphela kodwa nabadala baya bandakanywa ngoba sifunda okuningi kubo.”
Uqhube wathi: “Kusukela ngo-2016 kuya ku-2017 yonke le micimbi iba yimpumelelo futhi nomphakathi usabheke lukhulu kuwona kulo nyaka.
“Sithanda ukugqugquzela wonke umphakathi ikakhulukazi intsha ukuthi bebe yingxenye yomcimbi kulo nyaka. Sihlele ukuthi ube ngoMgqibelo mhla ka-22 kuMandulo [September].
“Kuzobe kuphume nesinedolo kanti nabaculi abazonandisa bazobe bekhone. Sinxusa umphakathi, osomabhizinisi, amabandla ahlukahlukene ukuthi asixhase nganoma yini ukuze umcimbi ube yimpumelelo,” kusho yena.
Uma uthanda ukwazi kabanzi ngomcimbi ka-Nobuhle neGeza Lensizwa thola imininingwane kwikhasi le -Facebook elithi:Nobuhle neGeza Lensizwa noma uxhumane noMnuz Sbusiso Nzama enombolweni ethi:073 911 9912 noma uMnuz Zama Zuma enombolweni ethi:
063 398 9769 noma uthumele umyalezo ngekheli le-email elithi: sbusisonzama396@gmail.com